Ukuphupha ngokungazi Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Abo bajongene nobomi ngokungazi bavaliwe kwizinto ezininzi kwaye bahlala bephazamisekile okanye bengazi nto. Abanye abantu bazama ukuzikhusela ngale ndlela nabo. Kuba baziva besekhaya "kwikona yabo encinci yobomi" kwaye abafuni ukucinga ngaphandle kwebhokisi. Kodwa ngale ndlela unokuphoswa zizinto ezininzi ebomini.
Kuthetha ukuthini ngoku ukuba umntu ubonisa okanye udibana nokungazi ephupheni? Kukutolika ntoni ukutolika kwamaphupha?
1 Uphawu lwephupha «ukungazi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ukungazi» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ukungazi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ukungazi» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokubanzi kuthathelwa ingqalelo, ukungazi ephupheni ngokubhekisele kwabanye abantu kunokutolikwa ngendlela yokuphupha el mundo vuka naye ukuzithemba isenzo. Uqinisekile ngesizathu sakhe kwaye luluvo kuphela olubalulekileyo kuye. Akanomdla kumbono wabanye abantu kuba akekho omnye umntu onokubakho ecaleni kwakhe. Umphuphi kufuneka alumke kakhulu ngesi simo sengqondo, kuba ngokukhawuleza oku kuziphatha kunokuba neziphumo ezibi.
Kwezinye iimeko, nangona kunjalo, le ngcaciso inokuguqulwa. Iindawo zokuphupha zibaluleke kakhulu uluvo abanye abantu kwihlabathi elivukayo. Ke isimboli yamaphupha ikucela ukuba wenze olwakho uluvo kwixa elizayo kwaye uyimele kwabanye. Ukutolikwa ngokuchanekileyo kweziphumo zokulala, nangona kunjalo, kuphela kuhlalutyo lweemeko zokuhlala kunye nokuziphatha kokulala kwihlabathi elivukayo.
Ukungazi mntu kwiqabane lakho njengophawu lwamaphupha, kwelinye icala, Ukulwa okanye ubonise iingxaki zonxibelelwano kubudlelwane. Kwelinye icala, iqabane ephupheni linokusebenza njenge Umfanekiso wesipili yamaphupha. Ke ngoko, uphawu lwephupha lukwafuna ukwazisa ukuba awuzazi iimfuno zakho. Kwixesha elizayo, kuya kufuneka uzimamele ngokwakho kwihlabathi lokuvuka kwaye uvakalise iminqweno yakho.
Ukuba iphupha alihoywa ephupheni, oku kuyabonisa Ukudideka kwihlabathi elivukayo. Izimvo zakho okanye izicwangciso zakho azenziwanga okanye azixatyiswanga. Oku kuyinyani ngokukodwa kwicandelo lobungcali.
Uphawu lwephupha «ukungazi» - ukutolikwa kwengqondo
Ukuba iphupha lifumanisa imeko-bume yalo ngokungazi ephupheni, oku kufanekisela inqanaba lengqondo yokutolikwa kwephupha. Inkqubo yoKhuseleko yokuphupha. Ufuna ukuhlala kwihlabathi ngokwemiqathango yakho kwaye ke ufihle izimvo zabanye abantu.
Kwakhona, ukungazi njengophawu lwephupha kunokubonisa ubuntu obunobuncinane bokuphupha. Iphupha linokungazithembi kwihlabathi elivukayo, liziva lingenaxabiso ebomini, okanye lingakwazi ukumelana nemisebenzi ethile yobomi.
Uphawu lwephupha «ukungazi» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya, uphawu lwephupha "ukungazi" kubandakanya okuthile ukungazi ngokomoya yokuphupha, kodwa ngubani ongathanda ukumelana nayo.